News Collection: यस्तो स्थितिमा हामीले के गर्नु उपयुक्त होला ?
यस्तो स्थितिमा हामीले के गर्नु उपयुक्त होला ?
म २२ वर्षीय अविवाहित युवक हुँ । सात वर्षअघि एक युवतीसँग मेरो प्रेम प्रारम्भ भयो । प्रेम गरेको लामो समयसम्म पनि हामीबीच कहिल्यै मनमुटाव भएन । हामी एक-अर्कालाई अत्यधिक सम्मान गर्थ्यौँ । यसै क्रममा हामीबीच धेरै पटक शारीरिक सम्पर्क भयो, तर अप्ठ्यारो कुरा के भने ती युवती र मबीच केही नाता पर्छ । नाताका हिसाबले मैले उनलाई फुपू भन्नुपर्ने हुन्छ । यो कुरा हामीलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी एक-अर्कासाग नजिकियौं । हामीले मन्दिरमा गएर सँगै मर्ने, सँगै बाँच्ने कसमसमेत खाएका छौं । अहिले आएर उनी भन्छिन्— 'हामी नहिँड्ने बाटो त हिंडिसक्यौं, अब यसमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन, तर हामीले विवाह गर्‍यौं भने आफन्त तथा इष्टमित्र सबैसँग टाढिनुपर्छ ।’ हामीले सानोतिनो काम खोजेर आफ्नो खुट्टामा उभिने भएपछि विवाह गर्ने निर्णय गरेका छौं । उनी अहिले २० वर्षकी भइन् । उनको घरमा विवाहको प्रस्ताव आइरहने हुनाले उनी मलाई तिमीबाहेक मेरो अर्को जिन्दगी मृत्यु हो भन्छिन् । यस्तो स्थितिमा हामीले के गर्नु उपयुक्त होला ? -साजन
हाम्रो समाजमा विवाहले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान राख्छ । विवाहका लागि हाम्रो समाजमा केही निर्दिष्ट मान्यता छन् । ती मान्यताले कतिपय नाता सम्बन्धमा विवाह निषेध गरेको छ । खासगरी रगत सम्बन्धमा विवाह वर्जित छ । पहिले-पहिले हाम्रो समाजको यस्तो मान्यतालाई सामाजिक सम्बन्धमा सन्तुलन ल्याउन बनाइएको भनिन्थ्यो, तर अहिले विज्ञानले पनि रगत सम्बन्धमा वैवाहिक सम्बन्धलाई अनुचित प्रमाणित गरेपछि हाम्रा सामाजिक मान्यताहरूको जरो कतिसम्म दृढ रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । जहाासम्म तपाईं र तपाईंकी फुपूबीचको सम्बन्धका बारेमा भन्नुपर्दा तपाईंको नाता सम्बन्ध कति नजिकको वा कुन हदसम्मको रगत सम्बन्धमा आधारित छ ? पत्रबाट खुल्दैन । तैपनि मलाई थाहा भएअनुसार बुबातर्फको सात पुस्ता सम्म र आमातर्फको पाँच पुस्तासम्मको रगत सम्बन्धमा विवाह गर्नु हुँदैन । यस्तो विवाहलाई हाम्रो समाजले मात्र नभै कानुनले समेत बन्देज लगाएको छ । यदि मैले भनेजस्तै स्थिति छ भने तपाईंको हकमा म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेसम्म तपाईंहरू कथित प्रेममा जहाँसम्म पुग्नुभएको छ, त्यसलाई त्यही टुंग्याइदिनु तपाईं र तपाईंकी फुपू दुवैको हितमा हुनेछ ।